Bankiga Nordea oo uga digay macaamishiisa tuugadda inernet-ka | Somaliska
Bankiga Nordea oo ka mid ah bankiyadda waa weeyn ee dalkaan ayaa macaamishiisa uga digay ineey ka digtoonaada tuugadda internet-ka ee baryahan farro ba’an ku heeysa.
Qoraal ay soo saareen ayeey ku sheegeen in kooxahan tuugadda ah ay isku dayayaan ineey dhacaan adeegga Bank Id loo yaqaan, kaas oo siyaabo badan loogu adeegto, sida bixinta biilasha, iibsiga iyo isu diradda lacagaha xagga internet-ka ah. Qoraalka ayaa sidoo kale lugu sheegay in “ciddii ay qabsato ee laga qaato lacag, aanney laheyn magdhow iyo lacag loo sii celiyo sababtoo ah beey yiraahdeen in qofka isaga u fududeeyey in tuugadaas dhacdo ama ay jabsado Bank Id-giisa.
Bankiga, ayaa ku andacoonaya ineey jiraan tuuggo dadka wacda iyagooo iska dhigaya ineey yihiin howl wadeeno ka socda bankiga, sidaasna ku hela xogta qofka ee bankigiisa. Bankiga waxaa kale oo uu sheegay in dad badan ay dhinacaasi dhibaato ka soo gaartay oo koontooyinkoodii lagala baxay.
Ugu dambeyntii bankiga waxaa uu ka digayaa in dadka adeegsadda adeegooda aanney sameeyn in macluumaadkooda ay siiyaan shaqsiyad eeysan aqoon ama ay yaqaanaan, waxeey sidoo kale ka digeen in adeegga Id-ga oo ku shaqeeya moobaaylada casriga ah ee gacanta aan cid kasta taleefankiisa laga adeegsan.
Mudooyiinkii ugu dambeeysay ayaa waxaa saxaafadda ay hadal heeysan dhibaatooyinka xagga tuugga internet-ka ay ku heeyso hey’adaha dalkaan Iswiidhan, kuwaas oo ay dhibaatooyin xoogan ka soo gaartay.